Iindlela ze-6 zokufumana i-ITIL Foundation Certification - ITIL Training kuGurgaon
Indlela yokufumana i-ITIL Foundation Certification kwiGurgaon
I-ITIL isingqamaniso seTeknoloji yeeNkcukacha zoLwazi lweThala leNcwadi. Kwakusungulwe ekuqaleni kwi-1980 yi-Central Central i-Arhente ne-Telecommunications Agency (CCTA) ukuphuhlisa isethi yemigangatho. Ngo-Ephreli 2001, i-CCTA yadibaniswa kwiofisi yase-UK Treasury-OGC.
I-ITIL yiseti yeendlela ezifanelekileyo zokuziphatha IT Service Service (I-ITSM) enceda ekuphumeleleni inkxaso enokwenzayo nokunikezelwa kweenkonzo ze-IT eziphezulu. Ikhosi ye-ITIL yeSatifikethi seSatifikethi sinikeza ulwazi olululo malunga neengcamango eziphambili, imigaqo, iinkqubo kunye nemisebenzi efunekayo kwi-ITSM. Ikhosi ilungiselela umviwa ukuba avele ngempumelelo ITIL Foundation uvavanyo lwesatifikethi.
Inkqubo ye-ITIL Foundation Certification ihlanganisa inkqubo ye-26 ITIL phantsi kweekomodyuli ezihlanu:
Ukuphuculwa kweenkonzo rhoqo
Isitifiketi se-ITIL sigunyazisa izakhono zobugcisa bomviwa ekusebenziseni i-IT njengesixhobo esinamandla sokuququzelela ukukhula kweshishini.
Nolu uluhlu lweencwadi ezithile ezinokuthi abafundi bakwazi ukufunda ukuze bafumane isitifiketi se-ITIL:
Ulawulo lweeNkonzo ze-IT: Isikhokelo sabaPhicothi beeSatifikethi seSiseko se-ITIL
Ishicilelwe yi-BCS kwaye ibhalwe ngu R.Griffiths, E. Brewster, A. Lawes kunye noJ. Sansbury, le ncwadi yinkxaso enkulu yokufunda kwabo bazimisele ukucima uvavanyo kwisilingo sabo sokuqala.
Bona kwakho :I-ITIL yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi
Kungaba ngcono ukuyibiza ngokuba ngumkhokelo wesifundo njengoko inceda abafundi ekuvavanyeni izinga labo lolwazi kunye nokulungela kwabo ukuvela kwiimviwo. Lo ngumkhiqizo ovumelekileyo ngokusemthethweni okwahlula kwicandelo emine-icandelo lokuqala linika umxholo wenkxaso yolawulo; Icandelo lesibini liquka iimodyuli ezahlukeneyo ze-ITIL yokuphila, icandelo lesithathu linika ingqiqo kwiinkqubo kunye nemisebenzi ye-ITIL; icandelo lesine lilonke malunga nemilinganiselo kunye neemitha.
Ukunikezelwa ngu-OGC, le ncwadi ichaza iziqendu ezinhlanu ze-ITIL kwizigaba ezihlanu. Iqala ngesicwangciso sesevisi, iqhubekela phambili kwisigaba sokuphucula inkonzo kwaye ihlanganisa zonke iimodyuli phakathi.
Iincwadi ezihlanu kwi-suite zidibeneyo kwaye ngasinye isigaba sidibaniswe kwinqanaba langaphambili. Konke kuxoxwa ngolawulo lwenkonzo njengendlela yokusebenza. I-ITIL Lifestyle Publication Suite ibuye ifumaneke njenge-PDF.
I-Foundation ye-ITIL I-2011 Exam Reference Book
Le ncwadi yesetyenzisiwe ibhalwe ngabafundi ababini abahlonishwayo be-ITIL - uHelen Morris noLiz Gallacher. Ikwahlula iimodyuli ze-ITIL zokuphila ngendlela elula kakhulu eyenza kube lula ukuyiqonda. Kukho ukusetyenziswa ngobukhulu kwemifanekiso, iitshathi kunye nemifanekiso evumela abafundi ukuba bafunde ngokwabo. Umxholo ulandelelana ngokulandelelana kwaye uchazwe ngemibandela yempilo yangempela kunye nemibuzo ekupheleni kwesahluko ngasinye ukulungiselela ukuqonda.
I-ITIL Foundation Essentials: Iimvavanyo Ezifunekayo
Ugunyazisiweyo ngumfundisi-nkulu we-ITIL, u-Claire Agutter, le ncwadi yinkxaso enhle kubafundi bokufunda. I-ITIL Foundation Essentials ixoxa ngokubaluleka kwe-ITIL ngendlela ehlelwe ngokuthe ngqo kwi-point-point, elula kwaye kulula ukuyiqonda.
Nangona imifanekiso encinci ingabonakali kakuhle kodwa isikhokelo esiluncedo sabasunguli abafuna nje ukufumana umxholo wenkcazo.
I-ITIL V3 Foundation Guide
I-ITIL V3 isiKhokelo soSiseko yi-eBook yamahhala enikezwa yiTaruu, inkampani yolawulo lweenkonzo ze-IT e-Indiana. I-45-page ephathekayo enezinto eziphathekayo ezibandakanya zonke iingcamango zekhosi ye-IITL. Ukusetyenziswa kwayo ngokufanelekileyo kwe-infographics kwenza ukuba lufunde kakuhle. Ichanekileyo kwaye ichaza iinqununu zezifundo ngendlela eqondakalayo. Inokusebenza njengencwadi yokuqala yabaqalayo kunye nabo bafuna ukuqinisa ulwazi lwabo ngezibonelelo ezongezelelweyo.
Ukugqithisa i-ITIL Foundation Exam yakho - 2011 Edition
Le ncwadi ingumlingane ofanelekileyo kubafundi abaphishekela isatifiketi se-ITIL isiseko. Ukugqithisa i-ITIL yeSiseko seSiseko ipapashwe ngokusemthethweni kwe-ITIL (oko kukuthi yi-TSO) kwaye ivunyiwe ngu-Accreditor Official I-ITIL. Esi sikhokelo soqeqesho sihlinzekela ngokubanzi ngokupheleleyo i-ITIL syllabus. Ikwahlula isahluko kungekuphela kokulawulwa kweenkonzo kunye nesezigaba zemihla ngemihla yokuphila kodwa inikezela ngolwazi ngokwalo vavanyo ngokwalo.
Uluhlu olukhankanywe apha ngasentla lukhuphe. Kukho ezinye ezininzi izibonelelo ezikhoyo kubafundi ukuphucula ulwazi lwabo kunye nokuncedisa uqeqesho lwe-ITIL kunye nesitifiketi.
# itil isiseko traininng
# isil isitifiketi sesiseko
# uqeqesho lwama-Gurgaon
# isil isitifiketi kwiGurgaon